मोबाइल चार्जर किन्दा के कुरामा ध्यान दिने ? - SabKura News
Home थप टेक्नोलोजी मोबाइल चार्जर किन्दा के कुरामा ध्यान दिने ?
मोबाइल बोक्नेहरुका लागि चार्जर महत्वपूर्ण पाटो हो । मोबाइलको चार्जर नक्कली हुँदा यसले मोबाइललाई नै बिगार्छ । चार्जरले ब्याट्रीको आयू घटाउँछ ।
चार्जको युएसबी केबल काटियो भने, तानियो भनेपनि यसभित्रको तार चुँडिन सक्छ, जसले गर्दा चार्जर काम नलाग्ने हुन्छ । जब चार्जर बिग्रिन्छ हामी बजारबाट सजिलै चार्जर लिएर त आउँछौं । तर, मोबाइल किन्दा जस्तो राम्रो चार्जर पछि किनेको हुँदैन । यो सबैले भोगेको र देखेको विषय हो ।
बजारमा पाईने चार्जरमा मोबाइल किन्दा पाउँने चार्जर जस्तो हुँदैन किनकी जुन कम्पनीको मोबाइल हो त्यो कम्पनीले मोबाइललाई उपयुक्त हुने किसिमको बनाएको हुन्छ । तर, बजारमा किनिने चार्जर सबै मोबाइल अनुकुलको नहुन सक्छ । त्यसैले मोबाइल चार्जर किन्दा केही कुरामा विशेष ध्यान दिनैपर्छ । केही टिप्स-
मोबाइलको वाट हेरेर किन्नुपर्छ
केबलमा जति छिटो इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ त्यति नै छिटो चार्ज हुन्छ । यसलाई ‘वाट’ एकाईमा नापिन्छ । मोबाइलको एडप्टर कति वाटको हो त्यो एडप्टरमा लेखिएको हुन्छ । त्यसैले एडप्टर जति वाटको हो त्यही अनुसारको केबल किन्नु जरुरी हुन्छ ।
छोटो केबल ठिक
केबलको लम्बाईमा पनि त्यसको क्षमता लुकेको हुन्छ । लामो केबल प्रयोग गर्दा बाटोमा नै इनर्जी नस्ट हुन सक्छ । त्यसैले चार्जर छान्दा छोटो छान्नु राम्रो हुन्छ ।
Previous articleयी हुन् कवाडीलाई पुल बेच्ने दुई वडा अध्यक्ष, गल्ती गरेको स्वीकार
Next articleमाछापोखरीबाट पेस्तोलसहित सात जना पक्राउ
अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीचको सैनिक अभ्यास स्थगित
पाँचखालमा खेतियोग्य जमिन प्लटिङ्ग गर्न ‘प्रतिवन्ध’
चौधरी फाउण्डेसनको पहलमा कुपोषणविरूद्ध राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ
राष्ट्रपति भण्डारीको म्यान्मार भ्रमण सम्पन्न, पाँच दिनमा के–के भयो ?